एक पानी सर्किट संग बयलर - यो छ, वास्तवमा, परिमार्जन मानक बयलर, थप निर्माण पानी सर्किट प्रदान गरिएको छ।
यो उपकरण निम्न तत्त्वहरू हुन्छन्:
एकल-क्षेत्रीय मोडेल ठाउँ मात्र लागि ताप प्रयोग गर्न सकिन्छ भने, दुई-सर्किट उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ ताप र तातो पानी को लागि दुवै।
को बयलर एक बाइपास को अधिग्रहण गर्न पूर्व कोठा हीटिंग मा जान्छ कि शक्ति निर्धारण गर्न सिफारिस गरिएको छ र तातो पानी ताप (10 मिनेट2लगभग 1 किलोवाट मा हुनेछ)।
लोड इन्धन स्वतः वा स्वयं हुन सक्छ। पहिलो मामला मा ठोस इन्धन लागि बयलर सुसज्जित जसमा इन्धन हरेक 3-7 दिन शैली प्रदान गरिएको छ एक जलाशय एक पानी सर्किट संग। तर, डाटा मोडेल, मार्गदर्शन podkidkoy इन्धन संग बयलर उपकरण तुलना, अधिक महंगा र त्यसैले कम साधारण हो।
ईंन्धन 25 मिमी, प्रशिक्षित गरिएको छ जो कोइला माथि प्रयोग गर्न सकिन्छ। केही ठोस इन्धन पानी सर्किट संग सुसज्जित विद्युत tenami निर्मित बयलर कि इन्धन आपूर्ति को समापन घटनाको चलाउनुहोस्। परिणाम बयलर एकाइ को एक लगातार सञ्चालन छ।
भौतिक प्रदर्शन ठोस इन्धन बयलर लागि फलाम र इस्पात को लेख विभाजित घर लागि पानी सर्किट संग। कच्चा फलाम लागि उपकरण ठूलो गर्मी क्षमता द्वारा विशेषता छ - यो अब गरम छ, तर त्यसपछि अब न्यानो राख्छ। तापमान परिवर्तन गर्न संवेदनशीलता - तथापि, एक महत्वपूर्ण drawback यी बयलर छ। यी चक्र धेरै छन् भने, र तिनीहरूले एउटा ठूलो दायरा - अप विफलता र विनाश, गर्मी एक्सचेंजर आवास चर्किएको छ।
deprived कमी एक पानी सर्किट संग ठोस इन्धन लागि इस्पात बयलर, तर तिनीहरूले प्रक्रिया condensate अपरिहार्य प्रभावबाट जंग थप susceptible छन्।
थर्मल ईन्जिनियरिङ् को क्षेत्र सबैभन्दा आधुनिक प्रगतिशील विकास - ठोस इन्धन दहन एकाइ विस्तार गरिएको छ। प्रायजसो यो उपकरण इन्धन को लोड लागि माथिल्लो प्वाल छ। यो गैर-मानक संरचनात्मक र प्राविधिक समाधान अधिकतम प्रभाव हासिल गर्न मद्दत गर्छ। इन्धन अब बल्छ र थप गर्मी विज्ञप्ति। साथै, त्यहाँ एक pyrolysis प्रभाव प्रयोग गरेर काठ ग्याँस afterburning, काठ को दहन समयमा जारी छ जो को प्रभाव छ, घर को लागि एक पानी सर्किट संग ठोस इन्धन बयलर छन्। प्रणाली को यस्तो उच्च दक्षता मा।
एक पानी सर्किट (तल उल्लेख) संग ठोस इन्धन बयलर इन्धन को निम्न प्रकार मा काम गर्न सक्छन्:
काठ बर्बाद कण।
पीट को briquettes।
यस कारण, सञ्चालनको आफ्नो सिद्धान्त छैन शास्त्रीय ठोस एग्रिगेट धेरै फरक छ। सुविधा मात्र, दहन कोठामा मा सविस्तार छ सुसज्जित बाक्लो पर्खालहरु संग एक बयलर। यो निर्माण को विश्वसनीयतामा सुधार र क्षय पछि बयलर सर्किट मा लामो-राखन कूलेंट तापमान योगदान पुग्छ।
इन्धन दहन दर विनियमन हावा dampers द्वारा बाहिर छ। ईंन्धन र यसको द्रुत ताप पूर्ण दहन कारण आगोको भट्टी को विशेष आकार हुन्छ। यो उपकरण को ताप प्रणालीमा पानी परिसंचारी दुई प्रकार मा सञ्चालन सक्षम छ:
गुरुत्वाकर्षण (प्राकृतिक) सबै भन्दा राम्रो पाइपलाइन पूर्वाग्रह प्रदान।
एक परिसंचरण पम्प प्रयोग गरेर बाध्य।
आफ्नै हातले पानी सर्किट संग ठोस इन्धन बयलर
कारखाना र घर बनाएको उत्पादनहरू बीच सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फरक दहन को एक विधि हो। को बयलर को क्लासिक संस्करण त्यहाँ इन्धन मिश्रित छ जसमा एउटा मात्र दहन कोठामा छ।
pyrolysis-प्रकार मशीनरी दुई क्यामेरा संग सुसज्जित छ, र यसैले यो एक उच्च emissivity छ।
माल र उपकरण
एक पानी सर्किट संग एक घर ठोस इन्धन बयलर निर्माण गर्न, तपाईं निम्न उपकरण र सामाग्री आवश्यक:
विभिन्न बोल्ट र पागल।
को अपकेंद्र प्रशंसक।
रड 20 मिमी।
आत्म-गरे एकाइहरु विभिन्न तरिकामा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यसो गर्न, तपाईं निम्न ज्ञान हुन आवश्यक पर्छ:
तपाईं सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट र कुशल पानी आपूर्ति विकल्प गणना गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
Competently गर्मी एक्सचेंजर को काम मापदण्डहरु को गणना प्रदर्शन।
सही र सही दहन कोठामा लागि स्थान निर्धारण।
तपाईं उपकरण पहिले नै आफ्नो घर मा स्थापित छ कि कारीगरों सहित जानकारी को धेरै पाउन सक्नुहुन्छ।
को ताप सिस्टम तपाईं पाएका छन् कि संगठनको कुनै पनि विधि, तपाईं परिवर्तन र सुधार गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै आवश्यकता अनुसार। यो व्यवसाय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - साक्षर गणना र बयलर को सही स्थापना।
हाल, कि ठोस इन्धन मा सञ्चालन उत्पादन, भर प्रयोग गरिन्छ र आगामी वर्ष मा तिनीहरूलाई वास्तविक वैकल्पिक अपेक्षा छैन। यो उपकरण को समीक्षा हामीलाई रूस मा लामो जाडो ताप सिजन आफ्नो indispensability को कारण बुझ्न अनुमति दिन्छ।
जो पानी सर्किट संग ठोस इन्धन बयलर सञ्चालन देश घरहरू र निजी को मालिक, स्थायित्व, कम मर्मतका, उपलब्धता र डाटा एकाइहरूको विश्वसनीयता, मा सहमत जो, केही बेफाइदा छ यसको सबै अकाट्य merits र। विपक्ष मानिन्छ र आफ्नो देश घर मस्यौदा को चरण मा न्यून पारिएको हुनुपर्छ।
ताप को समस्या सबै भन्दा राम्रो दृष्टिकोण तपाईं एक तर्कसंगत योजना पाश ताप र बयलर एकाइ को सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन चयन गर्न हुनेछ जो, यस क्षेत्रमा कुशल ती अपील गर्नेछ।
कसरी एक विकल्प बनाउन - को पेचकस लागि चार्जर
युवा कठबोली: के किंक? किंक - यो सामान्य हो
"किया Sorento" - कोरियाई एसयूवी को मिलाउने
कसरी साबर जूता हेरचाह गर्न? केही सुझावहरू
फिलिप्स भ्याकुम क्लिनर लागि फिल्टर: प्रकार र विशेषताहरु
Hyperventilation, यसको लक्षण
चकलेटहरू कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ। चकबोनहरू अझ बढी अभिव्यक्ति कसरी बनाउने?
एक हिममानब हुक कसरी बाँध गर्न: योजना। हिममानब हुक: मास्टर क्लास